SOANALA - BETROKA : Dahalo am-polony lavon’ny zandary sy ny miaramila
Niampatrapatra ny faty olona tany Vohidratsy Soanala Betroka. Dahalo am-polony indray no lavon’ny balan’ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana. 21 décembre 2017
Nifanjevo tamin’ny fifampitifirana ny dahalo sy ny mpitandro ny filaminana izay nahitana ny avy eny anivon’ny Zandarimaria sy Tafi-bahoala , tany Vohidratsy Kaominina Soanala Betroka.
Ny talata teo tamin’ny 2 ora maraina no nisehoan’izany fifandonana izany. Vokany , dahalo am-polony no matin’ireo miaramila sy zandary. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny vondron-tobim-paritra any Anosy ny Lietna- kolonely Ranaivoarison Théodule dia vokatry ny fiaraha-miasan’ny Zandary avy amin’ny Faritra Anosy sy Androy, ny Unité speciale anti-dahalo ( Usad) ary ny Bataillon inter-arme na BIA no nahazoana izao vokatra izao.
Nahazo fampandrenesana ireto farany tamin’io fa nisy asan-dahalo nahery vaika niseho tao Soanala ka nahazoan’ireo dahalo omby an-jatony. Niroso tamin’ny fanarahan-dia izany ireo mpitandro filaminana ireo. Nisy angidim-by nanao fisafoana ny tanàna ka ireo no nanome ny toromarika rehetra momba ny toerana misy ireo dahalo. Notomorin’ireo mpitandro ny filaminana izany, ka nisy ny fifanjevoana ary nahazoana ny vokatra tsara. Dahalo am –polony no maty ary tafaverina amin’ny tompony avokoa ny omby halatra rehetra.
Ady amin’ny dahalo
Matetika no iverimberan’ny dahalo ny Kaominina Beraketa Distrikan’i Bekily. Ny alin’ny alahady teo no nitrangana fanafihan-dahalo nahery vaika tany an-toerana. Fantatra mandalo ao Soanala Betroka ireo dahalo ireo izay toerana ratsy lalana no anaty kizo. Nifandrimbona noho izany ny zandary avy amin’ny Tobim-paritra Androy izay tarihin’ny lietnà –kolonely Randrianasolo Lova sy ny Tobim-paritra Anosy ny Lietna kolonely Ranaivoarison Theodule.
Ny BIA avy amin’ny miaramila ao Ihosy sy ny Usad izay namita iraka manokana any amin’iny tapany atsimon’ny Nosy iny no nifandrimbona nanao ny fanarahan-dia tamin’izany. Teny an-dalana anefa izy ireo no nahare io halatr’omby niseho tao Vohidratsy io, ka nifanehitra tamin’ireo dahalo sy ny omby. Mitohy hatrany ny ady amin’ny asan-dahalo ataon’ireo mpitandro ny filaminana ireto.